EFS ဖိုင်တွဲကို Back up လုပ်နည်း Androidsis
EFS Folder ကို Backup လုပ်နည်း
လာမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့သင်ခန်းစာ၌တည်၏ ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြင့်ပံ့ပိုးသည်ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့သင်ပေးမယ် EFS ဖိုင်တွဲကိုဘယ်လို Back up လုပ်နည်း.
ဤဖိုင်တွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် အန်းဒရွိုက်, နှင့်အမြစ်တွယ်သောပစ္စည်းရှိသူတိုင်းအထူးသဖြင့်သင်ဖြစ်လျှင်သင်လုပ်သင့်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် roms ကို flash နှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပရိတ်သတ်တွေ သင့်ရဲ့ terminal ကိုမှ။
1 EFS ဖိုဒါမိတ္တူတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာရယူရန်လိုအပ်သနည်း။
2 EFS ဖိုလ်ဒါကိုဘယ်လို backup လုပ်မလဲ။
ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်တာက၊ အမြစ်တွယ်နေသော terminalထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းလိုအပ်သည် root file explorerသူဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ အမြစ် Explorer ကို သို့မဟုတ် ES File ကို Explorer ကိုကနေရရှိနိုင်နှစ် ဦး စလုံး Play Store ကို.
EFS ဖိုလ်ဒါကိုဘယ်လို backup လုပ်မလဲ။
၏ backup လုပ်ထား EFS ဖိုင်တွဲ, လမ်းကြောင်းရိုးရှင်းစွာဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ထားသည် / efs ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်ဘရောင်ဇာနှင့်ဖိုင်တွဲတစ်ခုလုံးကိုကူးယူပါ။ ထို့နောက်၎င်းသို့ကူးယူပါ ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပ sdcard နောက်ဆုံး၌၎င်းကို hard disk, PenDrive သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာစသည့်လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။
el en ခေါင်းစဉ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ ငါအသေးစိတ်, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းမှန်ကန်သောရှင်းပြသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Terminal တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော rom ထည့်ရန်လိုအပ်ချက်များ, သင်၏ Android terminal ကို SuperOneClick ဖြင့် root လုပ်နည်း
ဒေါင်းလုပ် - အမြစ် Explorer ကို, ES File ကို Explorer ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » EFS Folder ကို Backup လုပ်နည်း
brayan eduardo munoz ortega ဟုသူကပြောသည်
brayan eduardo muñoz ortega အားစာပြန်ပါ
05/09/2012 22:50 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှစ၍ romics jb v2 ကိုကြိုးစားခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်သည်နောင်အနာဂတ်တွင်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းအကြောင်းကိုသိချင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်၎င်းဖိုင်များနှင့်ပြanyနာမရှိခဲ့ပါ။
06/09/2012 03:59 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Tobias Kai ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! အားလုံး Andoris ထုတ်ကုန်များအတွက်ကြည့်ရှု ??
ငါ atrix engo နှင့် EFS ဖိုလ်ဒါကိုငါရှာမနိုင် ???
Tobias Kai အားပြန်ပြောပါ
မက္ကစီကိုမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ file explorer နှင့်အတူ galaxy s3 တွင်ပြုလုပ်လိုသော်လည်း efs ဖိုင်တွဲထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာသို့မဆိုရွှေ့ပြောင်းပြီး၊ ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ * # 06 # ကိုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ imei ရှိသည်။ မိတ္တူကူးထားသော်လည်းဖိုလ်ဒါသည်ဗျ။ ပုံမှန်လား။ ငါအခြားနေရာမှာဖိုလ်ဒါကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ငါ root explorer ကို download လုပ်ပါ? ကျွန်ုပ်တွင်အမြစ်နှင့်အရာအားလုံးရှိပြီးသား၊ အကြံဥာဏ်အချို့ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့်နည်းတစ်နည်းမှာ play store တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် k-tool application ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် root explorer ရှိသည့် efs ဖိုင်တွဲကိုရှာရန်ကြိုးစားနေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေလိုက်သည်၊ ၎င်းကိုမတွေ့ပါ၊ ၎င်းသည်အခြားအမည်ဖြင့်ရှိပါသလား။
Francisco ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းသည် HTC Desire C ဖြစ်ပြီး ETS ဖိုလ်ဒါကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ၎င်းကို၎င်းကို Root Explorer နှင့်ရှာဖွေခဲ့သည်
ငါ EFS folder ကိုဆိုလိုတာ
နေ့လည်ခင်းကောင်းသောဖရန်စစ်စကို…ငါက Galaxy S ကိုလှန်ချလိုက်တယ်။ Imei ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ ကံကောင်းတာက EFS folder ကို backup လုပ်ထားပါ။ ပြissueနာကငါ folder ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ငါအချက်ပြခြင်းမရှိဘဲဆက်လက် (Imai မပါဘဲ, သင်သည်အဘယ်သို့အကြံပြုသနည်း
EFS folder ကို write permissions နဲ့ restore လုပ်ပြီး terminal ကို restart လုပ်ပါ
Cristian Santamariaa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် s2 ၏မကောင်းသော root ကိုပြုခဲ့ပြီးဖုန်းသည်မဖွင့်ပါ၊ ၎င်းသည် modes နှစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ ဝင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မဖွင့်ပါ။ အကြံပြုသည်။
Crisstian Santamariaa အားပြန်ပြောပါ
Louis Albert R. ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ် samsumg galaxi s3 ကို root လုပ်ပြီး Android 4.2.2 ကို install လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မမှာပြသနာရှိပါတယ်။ ES File Explorer အမည်ရှိ play store မှ explorer တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်သောအခါ EFS ဖိုလ်ဒါကိုကျွန်ုပ်ရှာသည်။ ကျွန်ုပ်ဖိုင်များပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းဖိုင်များတွင်မရှိပါ။ ငါသည်သင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်တန်ဖိုးထားတယ်
Luis Alberto R. အားပြန်ကြားခြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် s3 ကို rom 4.2.1 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးတာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွန်ပြူတာကအချက်ပြမှုကိုမယူပါဘူး။ xq ငါမသိဘူး။ efs တွေကိုကော်ပီကူးမထားတဲ့အတွက်ငါအရမ်းကြောက်တယ်။
သို့သော် dewelta 4.1.2 ကို install လုပ်ပါ
အခုတော့ငါ 4.2.2 install လုပ်နိုင်ပါတယ်
သို့သော်ပထမ ဦး စွာ efs မိတ္တူကူးယူပါ။
ငါ 4.2.2 install လုပ်ပါ
အကယ်၍ ၎င်းသည်အချက်ပြမှုမပြလျှင် EFS ဖိုလ်ဒါကိုကျွန်ုပ်ပြန်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အချက်ပြမှုသည်အလုပ်လုပ်သည်။ oq ကျွန်ုပ်လုပ်ရမည်ကျွန်ုပ်၏ s3 i9300 ကိုလွှတ်လိုက်ပါ
ငါdarg ။ ထိုအခါငါ movistar လိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
Danny Johanssen အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် 4.3 ကို i9003 မှာ install လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီနေ့ငါ gapps နဲ့ signal တွေပြတ်သွားတဲ့ puff ကို install လုပ်ဖို့ reboot လုပ်သွားတယ်။ !!
ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။ သင်မကူညီနိုင်သည့်အရာမရှိသေးပါက efs နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ?? imei သည်ပန်းကန်များနှင့်တူညီသည်
Henry Principe Lion ကိုပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သိထားလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ယခင်လျှောက်လွှာများကိုအခြားသူများအကြား spen အဖြစ်သိမ်းထားနိုင်လျှင်ဖြစ်သည်
ငါ့မှာ s3 mini ရှိတယ်၊ မသိဘဲငါစက်ရုံပုံစံကိုပြန်ထားတယ်။ imei နဲ့ mobile ရဲ့ signal ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ efs ဖိုင်တွဲကိုရှာဖို့ညွှန်ကြားတယ်၊ ကူးယူခြင်း ariza patch ကိုရှာဖွေရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းသည် rootie ကိုထည့်သွင်းမထားပါ။ imei ကအင်ဂျင်နီယာ mode တွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည် sim evenlook တွင်မပေါ်ပါ။
ကျွန်တော့် s3 ကတရုတ်ပါ